▷ Ahoana ny fomba fananganana Fortnite amin'ny PS4
Fortnite Izy io dia nitondra mpilalao mahay manao zavatra marobe ao anatin'ny tontolo malalaka izay nivoatra nandritra ny vanim-potoana maro.
Ny mpilalao dia afaka manao zavatra kely amin'ny fananganana fortnite Ary ity dia zavatra ahafahanao mamoaka ny famoronana olona an-jatony izay manao fiainana ao anatin'ny lalao.
Ahoana no ahafahako mahazo fitaovam-panorenana ao Fortnite?
Ny olona te hahazo fitaovana ao Fortnite azon'izy ireo atao amin'ny fomba tsotra izay tsy haharitra ela. Ny zavatra tsy maintsy ataon'ny olona dia ny fiadiana amina paikady ary mivoaka amin'izao tontolo izao hitady fitaovana.
Raha vantany vao azo ny tampon'isa, ny olona dia ho afaka hiditra amin'ny fahafaha-mandray zavatra izay misy amin'ny lalao. Afaka manangona izy ireo hazo, vato na vy.
Raha vao manana fitaovana ampy hananganana ny mpilalao dia afaka mivoaka sy manao ny asany izy ireo.
Ahoana no fomba hanorenako ao Fortnite?
Raha vantany vao nangonin'ny olona ireo fitaovana dia azonao atao ny miditra amin'ny famoronana singa samihafa noho ny lalao.
Ny sety dia manolotra eo anelanelan'ny tsanganana mitsivalana, mitsivalana, tady ary domes. Samy manana ny vidiny avy Fitaovana 10 amin'ny fitaovana ampiasaina ary hanana sarintany fananganana ireo mpilalao.
Raha vantany vao nifidy ny toerana hananganana isika dia tsy maintsy miditra amin'ny menio fananganana ary manomboka manangana ilay sanganasa tadiavintsika. Ireo sombin-javatra dia mahazo fahasalamana isaky ny segondra mandalo mandra-pahatongany any amin'ny farany ambony.
Mba hananganana singa tsara kokoa, dia ampirisihinay hanao ny fitsapana ao amin'ny fomba famoronana satria hanana fotoana ahafahanao manao an'izany am-pitoniana ianao. Manaova fanazaran-tena arak'izay azonao atao sy ankafizo ireo fahafaha-manao rehetra aroson'ny sainao aminao.